Evolution Gaming မှ Crazy Time ဂိမ်းတိုက်ရိုက်လောင်းကစားရုံ -
Crazy Time သည်အောင်မြင်သော Dream Catcher ၏ပိုက်ဆံဘီးအယူအဆအပေါ် အခြေခံ၍ ထူးခြားသည့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂိမ်းဖြစ်သည်။ ယခုအပြန်အလှန်အားဖြင့်ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်အရူးအမူးအဆင့်အသစ်များသို့ရောက်ရှိလာပြီးဂိမ်းပတ်ပတ်လည်တစ်ခုစီနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအပိုဆုကြေးလေးခုတွင်မြှောက်စက်များထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဒြပ်ထုများနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသည်ကစားသမားများအားဆုကြေး (၄) ခုအနက် (၂) ခုတွင်မတူညီသောမြှောက်ကိန်းများအနိုင်ရစေသည်။ နောက်ထပ်အဆင့်မြင့် RNG gameplay ဖြင့်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေမှုကိုကမ်းလှမ်းလျက် Crazy Time သည်တစ် ဦး တည်းသောကစားသမားအတွေ့အကြုံကိုရရှိသည်။ multiplier များနှင့်အတူ 25x အထိဖြင့်ပျော်စရာသည်အဆင့်သစ်သို့ရောက်ရှိသည်။
အစဉ်အဆက်လုပ်အများဆုံးပျော်စရာလောင်းကစားရုံဂိမ်းအဘို့အဆင်သင့်ကိုရယူပါ! Crazy Time သည်အပိုဆုကြေးများနှင့်မြှောက်ကိန်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးကစားခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်း၌ပျော်စရာကောင်းသောဂိမ်းပြပွဲဖြစ်သည်။
Crazy Time ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ကြီးမားသော၊ ရောင်စုံ။ ဖျော်ဖြေမှုရှိသောစတူဒီယိုတစ်ခုတွင်အဓိကကျသောငွေဘီး၊ ငွေဘီး၏အပေါ်ဆုံးအပေါက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆုကြေးငွေဂိမ်း ၄ ခုဖြစ်သော Cash Hunt၊ Pachinko, Coin Flip နှင့် Crazy Time တို့ပါဝင်သည်။
Crazy action-packed gameplay သည်အဓိကဂိမ်းနှင့်အပိုဆုကြေးလေးခုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ကစားသမားသည်နံပါတ်များ (၁၊ ၂၊ ၅၊ ၁၀) နှင့် / သို့မဟုတ်အပိုဆုကြေးများကိုအလောင်းအစားပြုလုပ်သောကြောင့်ဂိမ်းကစားရန်လွယ်ကူသည်။ အပိုဆုကြေးနှစ်ခုတွင်ကစားသမားများသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချနိုင်သည်။
အဓိကဂိမ်းတွင်ထိပ်တန်းကဒ်အထိုင်သည်ဂိမ်းပတ်ပတ်လည်တစ်ခုစီ၏အဓိကငွေဘီးနှင့်လည်နေသည်။ top slot သည်နံပါတ် (သို့) အပိုဆုကြေးတစ်ခုအတွက်ကျပန်းအလောင်းအစားတစ်ခုအတွက်ကျပန်းမြှောက်ကိန်းတစ်ခုထုတ်ပေးသည်။ အကယ်၍ မြှောက်ကိန်းနှင့်အလောင်းအစားတည်နေရာသည်အပေါ်ဆုံးကဒ်အထိုင်တွင်အလျားလိုက်ညှိထားလျှင်၎င်းသည်ကိုက်ညီမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြှောက်ကိန်းကိုထိုနေရာတွင်ထပ်ပေါင်းမည်။ ဒီမြှောက်ကိန်းကလောင်းကြေးကိုများပြားစေလိမ့်မည်သို့မဟုတ်လောင်းကစားဂိမ်းအတွက်မြှောက်ကိန်းများမြှောက်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအားလုံးစက်ရုံအတွက်ဤအချက်မှာရပ်တန့်ခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်!
ကစားသမားအားလုံးသည်ဆုကြေးငွေများကိုကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့၏လောင်းကြေးကိုနေရာမှန်၌နေရာချသောကစားသမားများသာပါ ၀ င်နိုင်သည်။
Cash Hunt သည် ၁၀၈ ကျပန်းမြှောက်ပွားနိုင်သောကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်းအကွာအဝေးဖြစ်သည်။ မြှောက်ကိန်းများကျပန်းသင်္ကေတများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားပြီးနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲစတင်သောအခါကစားသမားသည်မိမိတို့၏ပစ်မှတ်ကိုမသတ်မှတ်မီရောထွေးနေကြသည်။ ကစားသမားသည်သူအကြီးမြတ်ဆုံးမြှောက်ကိန်းကိုဖုံးကွယ်ထားသည်ဟုသူယုံကြည်သောပစ်မှတ်ကိုရွေးချယ်သည်။ အဆိုပါအမြောက်များပစ်မှတ်မှာရိုက်နှင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ပြီးနောက်အနိုင်ရမြှောက်ကိန်းဖော်ပြသည်။
ကစားသမားတစ် ဦး စီသည်ဤအပြန်အလှန်အပိုဆုကြေးအကန့်အသတ်ဖြင့်မိမိတို့၏ပစ်မှတ်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။
အကြွေစေ့၏ပစ်ကမည်သည့်မြှောက်ကိန်းအနိုင်ရလိမ့်မည်ဆုံးဖြတ်ရန်! အပြာနှင့်အနီရောင်နှစ်ဖက်ပါသည့်အကြွေစေ့ကိုပြန်လှန်လိုက်သည်။ အကြွေစေ့ကျသောအခါအနိုင်ရသူသည်အနိုင်ရရှိလိမ့်မည်။ ဒင်္ဂါးပြားကိုအလိုအလျောက်လှန်လိုက်သည်နှင့်မြှောက်စက်နှစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်၊ တစ်ခုသည်အနီရောင်ဘက်နှင့်တစ်ခုသည်အပြာရောင်ဘက်အတွက်ဖြစ်သည်။
Pachinko အပိုဆုကြေးဂိမ်းတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတံစို့များစွာပါသည့် Pachinko နံရံကြီးတစ်ခုပါရှိသည်။ တင်ပြသူသည် puck ကိုကျလိမ့်မည်။ အကယ်၍ puck သည်“ DOUBLE” ပေါ်သို့ရောက်သွားပါကနံရံ၏အောက်ခြေရှိမြှောက်ကိန်းများအားလုံးနှစ်ဆတိုးပြီး၊ အမြှောက်ကိန်းအမြင့်ဆုံးမြှောက်ကိန်း ၁၀,၀၀၀ အထိရောက်သည်အထိ puck ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
CRAZY TIME အပိုဆုဂိမ်း
တံခါးနီကိုဖွင့ ်၍ moneyရာမငွေတပ်ဆင်ထားသောအရူးနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောကမ္ဘာသို့ဝင်ပါ။ ကစားသမားတစ် ဦး စီသည်ကစားပွဲမစတင်မီသူတို့၏ပေါက်ကိုရွေးချယ်ကြသည် - အပြာ၊ အစိမ်းသို့မဟုတ်အဝါ။ ဂိမ်းတင်ဆက်သူသည်အနီရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဘီးကိုစတင်သည်။ ဘီးသည်ရပ်တန့်သွားသောအခါကစားသမားသည်ခတ်မှဖော်ပြသောမြှောက်ကိန်းကိုအနိုင်ရရှိသည်။ အကယ်၍ ခတ်သည်ဘီးပေါ်တွင် "DOUBLE" သို့မဟုတ် "TRIPLE" တန်ဖိုးကိုပြပါကမြှောက်ကိန်းအားလုံးနှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆဖြစ်လာပြီးဘီးသည်တဖန်လည်ပတ်လိမ့်မည်။ ဤခတ်မှုကိုရွေးချယ်သောကစားသမားများသာဤပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ မြှောက်စက်များသည်အများဆုံးမြှောက်ကိန်း ၂၀၀၀၀ အထိမရောက်မချင်းဘီးကိုနောက်တဖန်လှည့်နိုင်သည်။